Die loo shubay, ridaya Sand Aluminum, qiray CNC Machining - Innovaw
Ningbo INNOVAW farsamo CO., LTD waa soo saaraha ah xirfadeed ee loo shubay oo qayb machined oo si weyn loo isticmaalaa Automotive, Medical, earthmover, batroolka, korontada iyo Warshadaha iftiiminta. Daahirinta ganacsiga muddo dheer macaamiisha ajnabiga ka North America iyo galbeedka Europe, waxaan si dhab ah waxaa ogaan waxa looga baahan yahay qofka macaamilka ah marka ay bixiyaan sawiro iyo wax ka sooca. Iyo injineernimada soo jeedin kartaa habka ugu fiican iyo technology in la sameeyo ka kooban ama design wax laga beddelo haddii loo baahdo. Inta badan waxyaabaha yihiin dhoofiyo Kanada, USA, iyo galbeedka Europe Germany, France, Italy, Norway, Finland, Switzerland, iwm iyo guuleysan sumcad wanaagsan ku dhex macaamiisheena.
Ningbo INNOVAW shubay dhinta waa hogaamiyaha dunida ee sax loo shubay dhiman ee zinc, aluminium iyo magnesium Alloys. daraasado View ka warshado kala duwan fikrado horumar ka kooban iyada oo loo shubay dhiman.
Annagu waxaannu nahay TS16949 iyo ISO14001 shahaado.
saaraha professinal of tooling dhinta loo shubay, shubay dhinta kar sare, aluminium shubay cuf, shubay dhinta cadaadis hoose, sax CNC machining ku dhawaad ​​20 sano.